TOMATO "KATE": SIFOOYINKA IYO SHARAXAADDA YAANYO KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Noocyo yaanyo "Katya" si fiican u tijaabiyey laftooda noocyo hore bislaada yaanyo.
Iyada oo tayo wanaagsan, sida iska caabinta cudurrada iyo xaaladaha cimilada, dabacsanaanta yaanyo "Katya" waxay kasbatay aqoonsi malaayiin qof oo xaafadda deggan.
Xitaa bannaanka u janjeeri karaa dhirta sida yaanyo, sababtoo ah uma baahnid daryeel gaar ah. Isla mar ahaantaana, "Kate" waxaa lagu gartaa dhalid wanaagsan iyo dhadhanka, iyo waayo-aragnimada beerashadeeda waxay ka tagi doontaa aragtiyo aan caadi ahayn oo wanaagsan.
Tamaandhada noocyo kala duwan waxay ku habboon yihiin isticmaalka cusub, waxay kaloo isticmaali karaan cabitaanka casiir, yaanyo iyo ilaalinta.
Kate "waa nooc isku dhejisan, taas oo macnaheedu yahay in ay isku darayso tayada ugu fiican ee noocyo badan oo kala duwan. Aynu eegno astaamihiisa asaasiga ah, waxaanna ogaanaynaa sababta ay ugu caansan tahay labada beelood ee khibrad leh iyo kuwa bannaanka u ah.
Ma taqaanaa? "Katya" oo kala duwan ayaa waxaa lagu xayeysiiyay jadeecada horraantii 2000-maadkii.
Tomato "Katya": dhalidda iyo noocyo kala duwan
Si aad ugala hadashid tamaandhada "Kate", oo ah astaamaha iyo sifooyinka noocyada kala duwan, waxaa haboon in laga bilaabo xaqiiqda ah in ay tahay isku jir ah F1. F waa carruur (laga bilaabo filliinka talyaaniga), 1 waa tiradii jiilka. Taasi waa, "Kate" - waa isku xidhka jiilka kowaad.
Laga soo bilaabo xilliga beeritaanka abuurka iyo ilaa muuqaalka miraha bislaado iyo casiir leh, waxay qaadataa 75 ilaa 80 maalmood, sidaas darteed, noocyada kala duwan ee yaanyada waxaa loo tixgeliyaa Bisaylkiisa hore. Waxaa la kori karaa labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan.
"Kate" waxay si fiican u dulqaadaneysaa roobab iyo abaar culus, sidoo kalena waxay muujinaysaa iska caabin adag oo la xiriirta cudurrada cayayaanka sida kalluunka sare, fayruuska tubaakada, dabeecada dambe iyo Alternaria. Tamaandhada "Katya" waxaa lagu gartaa height height of 60 cm, kaas oo lagu kala duwan yahay cawska caadiga ah.
Isagoo ka hadlaya dhalidda yaanyadani, waa in la sheegaa in marka koraan dhulka xaaladaha furan, 8-10 kg oo dalag ah laga goyn karo hal m2 oo geedo ah. Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, hal m2 oo geedo ah ayaa keena ilaa 15 kg.
Miro-dhoofeedyada ganacsiga ee 80-94% wadarta wadarta. Tani noocyo kala duwan oo tamaandho ah ayaa lagu gartaa abuuritaanka inflorescences fudud iyo jiritaanka joogtada ah ee caws.
Waa muhiim! Caadi ahaan inflorescence ugu horeysay ee foomamka caleen shanaad, iyo in burush kasta oo ku saabsan 8-9 yaanyo ku xidhan yihiin.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka yaanyo "Katya"
Ka mid ah faa'iidooyinka yaanyo "Kate" waa sifooyinka wanaagsan ee soo socda:
dhadhan fiican iyo tayada badeecada ee yaanyada;
duubka lebiska ee yaanyada, taas oo si weyn u fududaynta goosashada;
Gaadiidka wanaagsan ee tamaandhada iyo iska caabbinta dhaawaca farsamada.
Noocyada ugu weyn ee calaamadaha "Kate" - laamaha gariirka. Taasi waa sababta uu dhirta u baahan yahay taageero dheeri ah (waxaad baadhi kartaa baadiyaha si aad u yar).
Sidoo kale mararka qaarkood waxaa jira dhacdooyin lagu jabiyo warshad fomoz ah iyo miro yaanyo.
Dareeraha Bordeaux (fomoz) iyo 5% xal milix ah oo kiniinka ah (yaanyo miro) ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduradan.
Noocyada kala duwan ee geedo sii kordhaya "Katya"
Tamaandho noocyo ah "Katya" waxaa lagu talinayaa in la koro iyadoo la isticmaalayo habka seedling, iyo ka dib horumarinta cotyledons, waxaa fiican inaad soo qaado dhirta. Geedaha 15-20 cm sare waxaa lagu beeray dhulka furan.
Waxaa ugu wanaagsan in la demiyo inta lagu jiro xilliga ay suurtagal tahay in qabsashada qabowga iyo dhaxan ay noqdaan kuwo aad u yar. Xasuuso in masaafada u dhexaysa godadka ay ka yaryihiin 45 cm, godadka waa in ay ahaadaan qoto dheer oo ku filan in warshadu ay dareento raaxo.
Waa muhiim! Si aad u hesho goosashada hore, xitaa bishii Maarso, abuurka waa in lagu beeray weelasha buuxa substrate nafaqo leh.
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee yaanyada, waa inaad u hoggaansamaan shuruudaha ka kooban yahay ciidda. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay goosashada wanaagsan ciidda ciidda ama loamy hawada lagu neefsado.
Si loo go'aamiyo nooca carrada Dhismuhu wuxuu ku filan yahay in uu qaato cantoobo yar oo dhulka ah oo ku qoy biyo ku habboon calaacalka gacantaada. Ka dib markaa, ku calaamadee xaalad ah cajiinka dhifka ah oo u dhexeeyaa calaacashaada nooca "sausage" oo leh dhexroor ku saabsan qalin.
Hadda isku day inaad gashid "sausage" bukaanka - haddii lagu dillaaco meelaha lakabka ah, markaa tani waxay ka dhigan tahay in ciidda iska leh nooca qiiqa. Haddii giraantu soo baxdo xitaa iyadoon dillaacin - dhulku waa dhoobo.
Noocyada noocan ah ee ciidda waxay ku haboon yihiin noocyada soo kordhaya "Katya", laakiin mid kasta oo ka mid ah ayaa sidoo kale u baahan bacriminta saxda ah, taas oo:
3-4 sano oo kasta waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro burka dolomite ama lime carrada duurjoogta ah (250-600 garaam oo walxo ah ayaa loo isticmaalaa m2 kasta).
In ciid ah dhoobo culus m² kasta, ku dar 1.5-2 baaldiyo ee qudhuntay (1-2 sano jir) digada ama compost. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa hal baaldi biyo ciid ah, oo hore loogu qooyay xalalka HOL (oo lagu darsaday saamiga 150 garaam 10 litir oo biyo ah).
Xisaabi wakhtiga lagu beerayo abuurka yaanyo ma aha mid adag. Kala duwan ee yaanyada "Katya" waa bislaansho hore, taas oo macnaheedu yahay in ku dhowaad 100 maalmood laga bilaabo xilli sii kordhaya illaa midhaha ugu horeysa ay muuqato.
Si aad u hesho tamaandhada ugu horeysa ee saladhka 20-ka July, waxaad u baahan tahay inaad abuurto miraha 100 maalmood ka hor taariikhdan. Ku dar 7 ilaa 10 maalmood oo kabadan, oo lagu daro 3 ilaa 5 maalmood si loo bedelo geedo loo beeray ciidda. Iyadoo ku saleysan, abuurka abuurka waa in la fuliyaa horraantii Abriil.
Diyaarinta abuurka iyo abuurka abuurka
Qeexitaanka tamaandhada "Kate", iyo sidoo kale astaamahooda, waxaa ka mid ah qodob muhiim ah sida diyaarinta abuurka si ay u soo degaan.
Gaar ahaan, waxaa lagu talinayaa in jeermiska abuurka ka hor laga beerto si fudud oo la xaqiijiyey: buuxi miraha leh xal casaan oo daciif ah oo kiriim ah (1 garaam oo ah kiniinka potassium ayaa lagu qasi karaa 100 millilitir oo biyo nadiifa ah) kuna dhaaf 15 ilaa 20 daqiiqadood. Nidaamkan noocan oo kale ahi wuxuu ka caawiyaa abuurista abuurka cudurada kala duwan ee bakteeriyada.
Sidoo kale, ka hor inta beero, waxaad rinjin kartaa wax beerto in biyaha dhalada ah. Si aad u diyaarso, qaado bac caag ah oo adag oo buuxi leh 3/4 oo biyo ah. Xawaa dheecaan badan ka dib marka in ka badan kala badh biyo ayaa barafoobay. Si wadajir ah ula mid ah biyaha la isku daro, xayawaanka waxyeelada leh ayaa sidoo kale laga saari doonaa. Ka dib barafka barafka, waxaad heli doontaa biyaha biyolojiga firfircoon, oo leh awooda lagu kicinayo abuurka biqilka 2-3 maalmood.
Goobidda dhul furan waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo farsamooyin iyo qaabab kala duwan. Faa'iidada shaki la'aanta waa in xitaa kuwa bilowga ah ay si guul leh u beeri karaan yaanyada, taas oo ay ugu fudud tahay in la isticmaalo nidaamka beeritaanka caadiga ah: 70x30 cm leh formation of 2-3 caws, cufan beerto leh nidaamkan waa 3-4 dhirta halkii m².
Sida loo daryeelo geedo "Kati"
Tamaandhada "Kate" iyo sharaxaadda daryeelkooda, laga yaabee, waa in la bilaabaa weelasha dhalidda. Dhirta noocan oo kale ah waa inay lahaadaan meelo gaar ah oo hoose si ay u daadiyaan dareeraha xad-dhaafka ah. Maqnaanshahooda, dhirta waxay noqonaysaa mid u nugul cudurka sida "blackleg".
Waa suurtogal in lagu beero geedo wax kasta oo ka mid ah substrate beereed ama compost ka soo isku dar ah peat iyo ciid, oo la qaaday qaybo siman. Waa in aadan beerin abuurka yaanyo aad u qoto dheer, maadaama aad halis u tahay geedo khafiif ah oo daciif ah.
Substrate waa in si fiican u qoyaan ka hor beero. The seeds qudhoodu waxay u baahan yihiin in la kululeeyo, maaddaama ay ka qaybqaato sunta sunta iyo in si weyn loo hagaajiyo tayada beerashada. Si aad u diiriso abuurka, hubi beddelidda nidaamyada heerkulka: diirimid ilaa 48 saacadood heerkul ah +30 ° C, kadibna 72 saacadood oo kale heerkul ah +50 ° C Ka dib markii la beero iyo ilaa caleemaha ugu horreeya ay muuqdaan, ku hay heerkul aan ka sareeynin +23 ° C.
Ka dib muuqaalka caleemaha ugu horreeya, ka saar filim ka soo weelasha dhalidda, iyo si aan u soo bandhigin geedo aad u daciif ah uumiga xad-dhaafka ah, samee nidaamkan galabtii. Biyaha geedo leh il biyo ah oo la miiray iyo xusuusnow in dhirta aysan aheyn in ay si weyn u fatahay biyaha.
Pick picking waa geedi socodka transplanting caleemaha yar yar ka soo tank a for abuur beeri galay weel weyn oo buuxsamay ciidda. Qaadidda waa nidaam mas'uul ah oo xoojiya nidaamka asaasiga ah ee geedo yar yar. Sida caadiga ah pickling ee geedo waxaa la fuliyaa 20 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya. Sidaa darteed, muuqaalka ka mid ah laba xaashid ee sprouts, waxay si ammaan ah u fadhiisan karaan, laakiin kaliya hal saac ka hor tan, biyaha dhirta si fiican. Si taxaddar leh u ruxin waxyaabaha weelka lagu beero ku dul miiska, isticmaal maro xidhxidhay dhamaystiran oo si taxadar leh u kala qaybinta dhirta.
Hayso geedo ka dambeeya cotyledon iyo si tartiib tartiib ah u kala qaybiyaan xididada, hubinayaan in inta lagu jiro nidaamka aan iyaga ka baxsan oo aan dhul. Geedaha dhirta ku jira weel kala duwan ama unugyo. Samee godadka noocan oo kale ah si geedo si xor ah ugu habboon iyaga.
Ka dib markaa, waxoogaa tampi ah ciidda ku shub. Haddii geedo ay aad u yaryihiin ama aad u jilicsan yihiin, ka dibna waa ka fiicnaan inaadan ku waraabin weelasha dhirta, laakiin inaad ku rido digsi biyo, oo ku buufin qaybta kor ku xusan iyadoo la isticmaalayo dhalada buufin.
Shuruudaha abuurka geedo kala duwan "Katya" ee dhulka u furan
Tamaandhada waa geedka thermophilic, iyo "Kate" waa yaanyo super-soo bislaaday, si dhaqso ah u daaqi, sidaas darteed waqtiga beerto geedo ee dhulka u furan waxay ku xiran tahay dhacdooyinka atmospheric iyo xaaladaha heerkulka.
Taasi waa, sida ugu dhakhsaha badan ciidda kulayl yar, iyo dhaxan habeenkii ka weyn, geedo lagu beeray karaa si ammaan ah ee ciidda. May badiyaa waa ku habboonaan karaa, laakiin waqtiga ugu fiican waa qeybtii labaad ee May ama qeybtii hore ee Juun.
Ma taqaanaa? Tamaandho waxay si fiican u koraan habeenkii
Ka hor inta aadan bilaabin tamaandhada, waxaad u baahan tahay inaad godadka ka dhigto qiyaasta geedo iyo si taxadar leh u biyo (qiyaastii hal litir oo ceel kasta). Sidoo kale, hubi in la hubiyo in geedo ma u engegay, sababtoo ah xitaa dhirta yar oo qoyan oo aan xidid lahayn, oo jiran oo si tartiib ah u koraan.
Sidii horayba loo soo sheegay, "Kate" waa yaanyo yaryar ah, sidaas darteed marka la tilmaamayo noocyada kala duwan iyo geedi socodka beerashada waa lagama maarmaan in la xuso xaqiiqda ah in geedo waa in la beeraa wax yar oo ka sii korodhsan weelka.
Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan in ay ka saarto dhowr caleemo hoose oo ka mid ah geedka iyo sii xoojinta geedo intii suurta gal ah inta lagu jiro beerashada. Qoryaha ayaa lagu aasaa ilaa nus nus oo ah asliga ah, waxoogaa yar ayaa loo dhigayaa waqooyi-galbeed.
Si taxadar leh u jarribaan xididdada geedo oo ku dhufo sidan oo kale in darafyadu u jeedaan si toos ah xagga hoose ee godka.
Ka dib markii geedo yihiin beeray, biyaha dhirta, iyo si tartiib ah ku rusheeyaa godka laftiisa on top of lakabka ciidda qalalan.
Sida loo daryeelo yaanyo kala duwan "Katya"
Qeexida sifooyinka tamaandhaynta "Kate" waa in la ogaadaa in beerto ay tahay marxaladda koowaad ee wadada guusha, iyo kan labaadna wuxuu sidoo kale bixiyaa daryeel qotodheer oo warshad ah. Kala duwanaantu waxay u baahan tahay hilling, waraabinta joogtada ah iyo dabacsanaanta ciidda, iyo sidoo kale soo bandhigida dharka sare. Horumarka saxda ah ee baadiyaha iyo xakamaynta cayayaanka iyo xakamaynta cudurada waa mid aad muhiim u ah.
Ciidda u dhaxaysa safarka waa in ay si joogto ah u jajabaan, iyo mudada ugu fiicnaanta - 10-12 maalmood kasta, laakiin ugu yaraan saddex jeer muddada xagaaga. Isku day inaad ka fogaato qaabaynta qolofta marka aad dabacsan tahay. Haddii aaga beertaadu ka kooban tahay carrada culus, ka dibna dheeli tirka qoto dheer waa in la sameeyaa 10-15 maalmood ee ugu horreeya ka dib markaad transplanting.
Hilling ugu horeeya ee loo baahan yahay in la qaato 9-11 maalmood ka dib transplanting. Biyaha yaanyada ka hor habka, tan iyo hilling carrada qoyan si weyn u dardar-galin doonaa xididdada cusub. Mar labaad qaliinka waxaa la sameeyaa ka dib 16-20 maalmood kaddib marka ugu horeysa.
Sida horey loogu soo sheegey, yaanyada "Katya" waa noocyo hore u-horeeya, taas oo macnaheedu yahay in ay u baahan yihiin waraabinta goor hore iyo waqtigeeda. Sidaas darteed waraabinta godadka, 0.7-0.9 litir oo biyo ah halkii warshad ayaa loo baahan yahay. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu daro cabitaanku waa galabtii marka qorraxdu aanay aad u iftiin. Sidoo kale, hubi inaad biyo ku kari kartid tamaandhada xilliga ubaxa ee burushka koowaad iyo kan labaad, iyo sidoo kale ka hor ciidda iyo ka dib samaynta Bacriminta macdanta qalalan.
Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa 10-12 maalmood kaddib marka la beero, taas oo loo isticmaalo isku dar ah Bacriminta organic iyo macdanta. Sidaa darteed, baaldi 10 litir oo mullein ah (hal diga mullein ama slurry iyo 8-9 qaybood oo biyo ah) ku dar 20 garaam oo ah superphosphate.
Mid ka mid ah baaldi ka mid ah xalka nafaqada ah ayaa kuu oggolaanaya in aad geedi socodka 10 dhirta markiiba. Quudinta labaad iyo kan saddexaad (oo leh mudo ah 2 toddobaad) waxaa sameeyey bacriminta macdanta qoyan ee hoostiisa hoostiisa, ama isla markaa kadib markaad dabacsan tahay. 1 m² ee goobta aad u baahan tahay inaad sameyso 20 garaam oo superphosphate, 10 garaam oo amooniyam ah iyo 15 garaam oo cusbo ah potassium.
Waa muhiim! U hubso inaad la socoto heerka qoyaanka, taas oo kaa caawin doonta inaad iska ilaaliso ciidda iyo ilaalinta dhirta ka soo jajabiso miraha iyo xagooda danbe.
Muuqashada - Nidaamka lagama maarmaanka ah, oo ka kooban in laga saaro caleemaha xad-dhaaf ah dhirta. Haddii aadan joojin koritaanka ee asliga ah, jarida caleemaha dheeraadka ah, dhirta ayaa ku qarash gareyn doonta dhammaan nafaqooyinka koritaanka ee masska daaqsinka, iyo ma on horumarinta miraha.
Waxaa lagula talinayaa in la sameeyo qanjaruufo subaxdii, si dhirta loo bogsiiyo dhammaan boogaha habeenki hore. Marka hore, jaranjarrooyinka hoose waa la saaraa, kuwaas oo la gooyo maqas ama mindi. Si aad u ogaato waa mid fudud, sababtoo ah waa jeexitaan dhinaca dambe ah oo ka soo baxa sinaha caleemaha.
Si ay u koraan yaanyo yaanyo ah oo ka mid ah asliga ah, waa inaad ka saartaa dhammaan carruurta kore. Marka aad sameysid laba caws ayaa lagama maarmaan u ah inaad ka baxdo boodhka ugu weyn iyo kan ugu xooggan.
Laguma talinayo in ay koraan in ka badan saddex afkoda hal baadiyaha.
Sidoo kale, ha u oggolaan in jeexista dheeraadka ah inay kor u kacdo. Kormeerida warshadeynta dhuxusha ayaa ka fiican todobaadkii hal mar.
Daryeelka dhulku wuxuu ku lugleeyaa xayiraadda cirridka ah iyo cayayaanka. Dhamaan arrimahan waxay gacan ka geystaan ​​koritaanka nidaamka xididka, kor u kaca koboca, xoojinta dhirta iyo kordhinta wax soo saarka.
Noocyada ugu fiican ee mulch ah ee noocyo yaanyo "Katya" waa:
isku dar ah cawska-cawska;
Maaddooyinkaasi waxay ka soo jeedaan asalka dabiiciga ah, hagaagsan yihiin qoyaanka, iyo quudinta dhirta iyadoo la socota xubno waxtar leh. Badanaa, samaynta cayilku uma baahna aqoon iyo xirfad gaar ah. Waa ku filan inaad ku daboosho lakabka lebiska ee mulchka carrada, dabeecaduna waxay samayn doontaa inta kale ee adiga.
Tamaandho waa in laga ilaaliyaa haramaha si joogto ah, laga bilaabo xilliga beerto. Ha u ogolaanin in cawsku koro.
Si looga hortago tani, sameyso xakameyn joogto ah iyo hilling, iyo sidoo kale farsamooyinka ka saarista haramaha.
Ma taqaanaa? Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira 10,000 oo nooc oo yaanyo ah, ugu yar oo ka mid ah taas oo aan ka badneyn 2 cm dhexdhexaad ah, halka kan ugu weyni yahay 1.5 kg.
Goynta noocyo yaanyo "Katya"
Tomato "Kate" iyo wax soo saarka - sabab u ah sharaf ka mid ah beerta kasta, sababtoo ah kala duwan tani waxay awoodaan inay keenaan badan oo yaanyo casiir leh.
Ereyga ka mid ah goosashada waxay ku xiran tahay sida aad u isticmaali lahayd yaanyada:
Si aad u diyaariso saladh iyo suxuuno kale, soo ururi miraha si buuxda u kobcay. Waxa lagu go'aamin karaa sifooyinka noocan ah ee noocan oo kale ah qaab-wareeg ah iyo midab casaan leh.
Wixii ilaalinta of miro casaan iyo jilicsan habboon.
Wixii kaydinta muddada dheer, waxaa ka wanaagsan inaad doorato yaanyada ee loo yaqaan "Ripeness caanaha", marka midabka cagaaran ee miro isbedel ah si cagaar cirro leh, ku dhowaad caddaan ah.
Si kastaba ha ahaatee, xusuuso in dalagga oo dhan ee tamaandhada waa in la goosto ka hor inta heerkulka hawada u dhibciyo ilaa +13 ° C. Haddii kale, midhuhu wuxuu noqon doonaa mid madow oo noqonaya mid aan haboonayn isticmaalka aadanaha.
"Kate" waa noocyo cajiib ah oo yaanyo ah, kuwaas oo la kori karaa ma aha oo kaliya bannaanka u khibrad leh, laakiin sidoo kale by bilowga bannaanka, iyo dhadhanka miraha dhalaalaya dhalaalaya iyo casiir ma ka tagi doonaa indifferent xitaa goryaan fastidious.